Manje akukho emthethweni ukucekela phansi amafulegi e-EU kanye ne-NATO eGeorgia
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-Georgia Breaking » Manje akukho emthethweni ukucekela phansi amafulegi e-EU kanye ne-NATO eGeorgia
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ubugebengu • Amasiko • Izindaba ze-Georgia Breaking • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Akukho emthethweni ukungcolisa amafulegi e-EU kanye ne-NATO eGeorgia manje
Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili wabantu baseGeorgia asekela ukuhlanganiswa kweYurophu; kunenhlonipho ephezulu kakhulu nge-EU ezweni.
Isigamu sonyaka ngemuva kokuthi ama-radicals aseGeorgia akude kwesokudla namalungu amaqembu anenzondo edilize ifulegi le-European Union ngesikhathi rally ngokumelene namalungelo gay e Tbilisi, izishayamthetho Georgian sethule umthetho omusha okwenza kube ngokungemthetho ukungcolisa amafulege of I-European Union (EU), i-NATO, namazwe abo angamalungu.
Ehlobo lika-2021, kwaba nombhikisho e-Tbilisi ngokumelene nomcimbi waminyaka yonke wedolobha I-Gay Pride parade, lapho ama-radicals ahlasela izintatheli nezishoshovu. Adiliza futhi ashisa iyuniyani yase-Europe ifulege ebelilenga ngaphandle kwesakhiwo sephalamende. Lo mcimbi, obizwa ngeMarch for Dignity, ubone intatheli ebulala isixuku u-Alexander Lashkarava, nokwadala ukucasuka njengoba izinkulungwane zabantu zingena emigwaqweni zisola uhulumeni ngokugqugquzela amaqembu anenzondo.
Umthetho omusha wenza futhi ukudelelwa kwanoma yiziphi izimpawu ezixhumene nezinhlangano, kanye nazo zonke ezinye izifundazwe Georgia inobudlelwano bezokusebenzelana, okuyicala lobugebengu lapho izephula-mthetho zizohlawuliswa i-1,000 lari yaseGeorgia ($323).
“Izinhlawulo ezinjalo zivamile emazweni amaningi ase-Europe. Sicabanga ukuthi lezi zinguquko zizoba yisinyathelo sokuvikela ngokumelene nesigameko esingesihle esenzeka ngoJulayi. Sikholwa ukuthi lesi yisinyathelo esiqhubekayo,” kusho uNikoloz Samkharadze, ongomunye wababhali balo mthethosivivinywa.
Ngaphezu kokukhokhiswa inhlawulo, umenzi womthetho ophindayo angase abhekane nesikhathi esivalekile ngokungcolisa amafulegi nezimpawu.
I-Georgia ayilona ilungu le-NATO noma le EU nokho, kodwa ikhombise izifiso eziqinile zokuhlanganisa nezinhlangano zombili.
Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili wabantu baseGeorgia asekela ukuhlanganiswa kweYurophu; kunenhlonipho ephezulu kakhulu nge-EU ezweni,” kusho uKakha Gogolashvili, umqondisi we-Georgia's pro-EU Rondeli Foundation think tank.
“Akumele sivumele amaqembu aphikisayo enze izenzo ezinonya kangaka ngokumelene nezimpawu ze-EU kanye ne-NATO. Kubalulekile ukuthi iphalamende liphasise lo mthetho omusha ngokusekelwa ngamaqembu amaningi.”